Dowladda Soomaaliya oo ku guuleysatay dib u howlgelinta Dekedda Muqdisho waqtiga Habeenkii+sawirro – Madal Furan
Hoy > Warka > Dowladda Soomaaliya oo ku guuleysatay dib u howlgelinta Dekedda Muqdisho waqtiga Habeenkii+sawirro
Dowladda Soomaaliya oo ku guuleysatay dib u howlgelinta Dekedda Muqdisho waqtiga Habeenkii+sawirro
Editor August 12, 2018 August 12, 2018 Warka 0
Muqdisho(Madal Furan) Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka Dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ay wehliyeen Wasiiro iyo Saraakiil ayaa xalay Daah-furay In Dekedda Muqdisho ay habeenkii shaqayso, taasi oo la micno ah in habeen iyo Maalin ay dekadu shaqaynayso,si loo kordhiyo howlaha adeegyada ganacsiga kaladuwan.
“Farxad iyo guul bay inoo tahay in aan daah furno in Dekedda ay shaqeyso in habeen iyo maalin ay shaqeyso,anigoo ku hadlaya magaca Xukuumadda,raiiusl Wasaaraha,iyo Madaxweynaha JFS waxaan ku dhawaaqayaa in Dekedda Muqdisho ay diyaar u tahay in xiliyada habeenkii ah ay shaqeyso,Dekadda Muqdisho oo habeenkii shaqeysa waxay u dhigantahay horumar deg deg ah oo dhaqaalaha dalkeenu ku talaabsaday,taasina waxay noo sahleysaa in aan isku filnaano”. Ayuu yiri raiisul wasaare kuxigeenka Dalka.
Mudane C/raxmaan Ducaale Beyle Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in shaqdad Dekedda xiliyada habeenkii ay kaalin ka qaadanayso horumarka dhaqaale ee Dalka.
“Caawa waxaa noo suuro gashay in aan daahfurno in Dakadda Muqdisho ay shaqeyso 24saac, Ganacsataduna ay Badeecadohooda kala soo bixikaraan kana dhoofsan karaan Habeen iyo Maalin”. Ayuu yiri Wasiir Beyle
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadah Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Marwo Maryan Aweys Jaamac ayaa dhankooda ka hadlay ahmiyadda arrin ay leedahay iyo dadaalkii lagu bixiyay,iyagoo guul ku tilmamaya,wasiir Maareeye ayaa bogaadiyay in fursado la siiyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Qaar ka tirsan beelaha Puntland oo ka carooday kadib markii xukuumadda Deni ay xiniinyahooda farafareysay.
Ciidamada Xoogga oo Howlgal Qorsheysan ka fuliyay deegaanka Shaam ee G/Shabeellaha Hoose.
Guddoomiye Jawaari beri sidee yeeli doonaa?